Umhlahlandlela we-5 Card Stud Poker | Dlala i-5 Card Stud Poker ku-inthanethi
Ikhaya / Imihlahlandlela / i-5 card stud poker
I-5 Card Stud Poker
I-5 Card Stud Poker icishe ifane nezinhlobo ezithandwa kakhulu, i-7 Card Stud Poker. Umehluko omkhulu phakathi kwale midlalo emibili ukuthi wonke umdlali uthola amakhadi ayisihlanu, futhi yinye kuphela kulawa efihliwe kubaphikisi. Umphumela ukuthi isandla sakho esiphumelelayo ikakhulu asiqine njengakwezinye izinhlobo ze-poker – nokuthi ukubhangqa kungaholela ekwehliseni imbiza.
Abadlali baqala ngokuthumela i-ante ngaphambi kokuba kukhishwe amakhadi abo. Lokhu ukubheja okuncane kuphela futhi lezi zokubheja zokuqala zizokwakha ibhodwe lokuqala. Umdlali ngamunye uthola amakhadi amabili, 1 libheke phezulu ngobuso futhi libonakale kubo bonke abadlali, no-1 libheke phansi.
Bheka Isiqondisi Sethu se-Poker Eku-Inthanethi
Umdlali we-5 card poker onekhadi elibonisa okuphansi uqala ukubheja ngalokho okubizwa ngokuthi ukubheja okuphoqelelwe. Lokhu kubizwa nangokuthi ukungeniswa futhi lo mdlali angakhetha ukuthi ufuna ukukhuphula kulesi sigaba.
Amanye amakhadi amathathu wonke abhekwe abonakale kuwo wonke umuntu futhi wonke amakhadi asebenzisiwe alandelwa ukubheja. Ikhadi nomjikelezo wokubheja ubizwa nge street. Umkhawulo wokubheja uvame ukuphindeka kabili ngemuva street yesine. Ngokuvamile uvunyelwe ukukhulisa amahlandla amane kuphela kuyo yonke i-street.
Ipheya yisandla esihle sokuqala i-5 Card Stud Poker. Noma iyiphi ipheya ithathwa njengesandla sokuqala esihle kakhulu, futhi kufanele udlale lokhu ngokuqinile. Njengoba ipheya kuyinto engavamile, udinga ukucabanga ngezinye izandla. Ama-combos anamakhadi aphezulu mahle, ikakhulukazi ikhadi lakho eliphakeme lingcono kunalawo makhadi abonakalayo ezitha zakho. Awukwazi nje ukudlala amakhadi awu-2 uye ngqo, kepha uma lawa makhadi ephezulu, kuzokunikeza ithuba elingcono lokuwina.
Ku-5 Card Stud Poker, njengakuzo zonke izinhlobo zezitadi, kufanele ugcine inothi lamakhadi omunye umdlali. Lokhu kuzokuvumela ukuthi wazi ukuthi isikhathi esifanele ukusongwa nini, imvamisa lapho usubonile amakhadi amaningi owadingayo ukuthi alahlwe noma agcinwe ezandleni zabaphikisi.